Hel diyaar u ah inay tagaan on biimayn la Treasure 7×7. Tani waa mid ka mid ah ugu wanaagsan Bonus naadi Online isagoo ah theme cajiib ah burcad badeeda. Waxaa lagu wadaa badda xeebteeda leh badda buluug cad iyo xeebta bacaadka ah oo cad. Waxa loogu talagalay iyo in la horumariyo by IWG waa kuwa caan ku abuuro qaar ka mid ah kuwa ugu wanaagsan Bonus naadi Online in industry ee. Waxaad xitaa ku guuleysan karto ilaa abaalmarinta bonus in £ 200,000 dhamaadka ee wareega. Waxaa la bilaabay in 2016 wuxuuna helay saldhig ciyaaryahan weyn tan iyo markii. Waxay leedahay wax kasta ka muuqaallada cad oo tegayo to top saamaynta dhawaaqa lagu qiimeeyo inay 16 siyaabo kala duwan in ay ku guuleysato. Sidaas santuuq aad bac iyo guddiga in badeed markabka si ay u bilaabaan tacaburka on mid ka mid ah ugu wanaagsan Bonus naadi Online.
Ku biir Hunt The Waayo Treasure 7×7 in this mid ka mid ah iyo Bonus oo keliya, naadi Online
Tani ciyaarta booska uu leeyahay interface a mid aad u fudud oo sawiro ah ayaa loogu talagalay in ay ku habboon mawduuca dhammaataan. On shaashadda, waxaad arki doontaa laba loox u jeedi xeebta badda ah. Shaxda koowaad waa 7 a×7 miiska la sanduuqyada kala duwan in ay leeyihiin xaradhka la xiriira theme sida dheeman, Jawhar, hat-badeed, dhakada, giraanta, calanka markab iyo xataa markab burcad ah. Oo miiska kale, kuwani waa qaar ka mid ah albaabada alwaax su'aal ka dhigan iyaga on. Waxaa jira 12 albaabada guud. line kasta on 7×7 sanduuqa waxay leedahay lacagta guusha ku qoran oo ku saabsan. Options jeclahay awood / gab dhawaaqa iyo autoplay waxaa la siiyaa laacibka ee sahlanaato. RTP ama heerka abaalmarinta of this ee gaari kartaa ilaa ugu badnaan 89.90% oo waa weyn oo u qalma in kale Bonus naadi Online.
All oo ku saabsan gameplay
gameplay ee booska this waa u fududahay. Waxaa jira laba loox, mid ka mid ah in uu leeyahay 49 sanduuqyada iyo mid ka mid ah uu leeyahay 12. In laga bilaabo waa la weydiin doonaa in aad dhigay aad bet gujinaya ah + iyo – doorasho. taas ka dib, aad leedahay si aad u dooratid 7 oo ka mid ah 12 sanduuqyada. sanduuq kasta muujin doonaa calaamad. Haddii astaanta kulan on 7×7 Roobka, sanduuqa is muujiyey doonaa iyo astaanta la gudbay doonaa liiska. Si aad wax guul ah, aad u baahan tahay in ay ka gudbaan dhamaan calaamadaha ku siman labada a, vertical ama line a dadab. Taas macnaheedu waxa weeye in dhammaan 7 calaamadaha on line ah waa in la iftiimiyay. Haddii aadan rabin in aad doorato ah 7 naftaada sanduuqyada, waxaad riixi kartaa on doorasho Autoplay iyo ha software waxaa idiin sameeyo.
naqshadeynta Breathtaking, saamaynta dhawaaqa xiiso leh iyo gameplay a captivating jira waxyaabo in this tilmaami ciyaarta booska ku haboon. A iman kara guusha weyn waa sabab kale in this dhigeysa mida ugu fiican Bonus naadi Online.